Ndeipi iyo Pfungwa Yekukosha Kwako? | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 18, 2011 China, Gumiguru 27, 2011 Douglas Karr
Dzimwe nguva ndinofunga ndiri nzungu kutanga bhizinesi rangu ndega makore maviri apfuura (asi ini ndaisazove neimwe nzira). Nguva pfupi ndatanga bhizinesi ndakaziva kuti ndaive mudambudziko nekuti ndaive nechinhu chakakura asi ndisina kana zano rekutengesa. Ini ndaimisikidza chitaurwa nekufungidzira kuti ingangotora nguva yakadii ndobva ndaiwanza icho nemutero wangu weawa. Mhedzisiro yacho ndeyekuti zvinhu zvaizonditora ka2 sekureba uye ndanga ndichiita zvishoma pane zvandaizoita pazvitampu zvekudya ...
Yakanga isiri kusvika pandakasangana Matt Nettleton uye akawana kumwe kwekutengesa kudzidzisa kuti ndakaona kukanganisa kwenzira dzangu. I yanga ichitarisa kukosha kwebasa rangu, sekuratidzwa neyangu fungidziro, pane kubvumira mutengi wangu kukoshesa sevhisi. Ini ndaigona kushanda pamasaiti maviri akasiyana evatengi uye ndotendeuka yavo inbound yekushambadzira kuyedza, uye imwe inogona kuita mazana emamwe madhora uye imwe inogona kuita mazana ezviuru zvemadhora. Basa rimwe chete… maitiro maviri akasiyana.
Shanduko iya munzira yandakaita bhizinesi yakawedzera bhizinesi rangu. Ndichine vatengi vadiki vakawanda, asi izvo zvakafukidzirwa nevatengi vakuru izvo kukoshesa sevhisi yangu zvakanyanya nekuda kwemhedzisiro yekukanganisa pasangano ravo. Zvinosemesa ndezvekuti zvibatanidzwa zvidiki zvatiinazvo izvozvi ndizvo zvakanyanya kuomarara nekuti kuwedzera kwe10% mukudzoka kunogona kusatombovhara kubatanidzwa kwedu kwemwedzi wega!
Mumwe munhu akandibvunza rimwe zuva kana ndichifunga kuti yaive zano rakanaka pachena tengesa mitengo yemasevhisi pane yavo saiti. Vaifunga kuti ichi chiratidzo chikuru chekujeka uye chaizosimbisa kuvimba netariro yavo. Ini ndinoti hazviiti. Ini ndakatumira zvakare kuti paunoburitsa mutengo wako, mutengo ikozvino chinhu kuti makwikwi ako ese achakwikwidzana newe pa. Dambudziko newe rekushambadzira mutengo wako rakafanana neni uye zvinyorwa zvangu zvekutanga. Izvo hazvitore mukutarisa kukosha kwebasa rako kune tarisiro.
Kana iwe uri 99 zvigadzirwa, inoshanda. Uri kungokwikwidza kupokana nemamwe akadhura emasevhisi. Asi zvingangova mbeveve kune vamwe veangu graphic designer vanobatana kuti vatore izvo izvo logo inodhura musinganzwisise kukosha uko logo ingangounza kukambani. Marogo matsva ane rinotsanangurwa makambani! Chiratidzo chakachipa chinogona kuonekwa sedzakachipa - pamwe nekambani inomiririra. Iyo yemhando logo inogona kuchinja iwo maonero uye garner yakawanda yakawanda indasitiri kutarisisa.
Kushambadzira kwako kuratidzwa kwekunze kwemaonero iwe Iva nechiratidzo chako. Kana chikamu chemutengo uri mutengo, nenzira dzose, wedzera "zvakachipa" muzita rezita uye ukande mimwe mitengo yemakwikwi kumusoro uko! Nekudaro, kana kukosha kwaunounza kuri ruzivo, huchenjeri, ideation, kugona, uye mhedzisiro… chengetedza mitengo kubva panzvimbo uye rega tarisiro yako ifunge kukosha kwayo urikuunza. Kana isu tikasaina mutengi ka10 kakapetwa saizi yekontrakiti yeumwe mutengi, hatizviverenge nekushanda kakapetwa kagumi zvakaoma. Isu tinozviyera nekuyedza kuwana zvakapetwa kagumi mhedzisiro, kana kuwana mhedzisiro yakafanana mune chegumi chimwe panguva yacho.
Ive nekuchenjerera mune zvese kushambadzira kwako uye nzira yekutengesa kana zvasvika kune kukosha maringe nemutengo. Ivo havana kufanana! Mutengo imarii yaunobhadharisa, kukosha ndiko kukosha kwako kumutengi. Kushambadzira kwako kunofanirwa kusimudzira kukosha kwaunounza, kwete izvo zvaunodhura. Uye kana timu yako yekutengesa ikanyunyuta kwauri kuti ivo vari kurasikirwa nekutengesa zvichienderana nemitengo yako, tora vatsva vatengesi. Zvinoreva kuti havanzwisise uye havasi kubatsira tarisiro kuti uone kukosha kwaunounza.
Sidenote: Munguva ino yedambudziko, ndinowedzera kuti yedu yekushandira system ine dambudziko iri. Vanhu vanowanzo tarisira kukwidziridzwa zvichibva pane zvavo kushanda nesimba, mwero wekurarama, kana shanduko mumutengo wehupenyu. Ndiwo kukosha kwavo kwavanoona ivo pachavo. Hapana chimwe cheizvozvo chine hanya nekambani. Kubva pane izvo, vamwe vanowedzeredza kukosha kwavo… uye vamwe vazhinji vanozvitarisira pasi. Mubasa rangu rese (kunze kweNavy), ini chokwadi haana yakadzorwa kuti iwedzere. Yaive nekuti pachinzvimbo chekutaura COLA kana indasitiri zviyero, Ndakataura nezvazvo mhedzisiro uye purofiti. Yakanga isiri-brainer yekambani kundipa iyo 20% kukwidza pandaive ndichivachengetedza kana kuvaita zvakapetwa iyo mari.
Iwe Unotumira Meseji kubva muBathroom?
Gumiguru 19, 2011 pa 11:12 AM
Ini handina kukwanisa kubvuma zvimwe. Gore nehafu yapfuura ndakasangana nemabhuku eAlan Weiss akati wandei akandiita kuti ndione zvikanganiso zvese zvandaiita kana zvasvika pakutengesa mitengo yemasevhisi angu. Sezvaanotaura nemazvo achiti: "Chikonzero chikuru chemari yepasi yekubvunza ndeyekuzviremekedza". Mumasevhisi, zvinoita * zvachose zvisina musoro * kutengesa nguva, sekunge kukosha kwatinounza kumutengi kwakabatana nenguva yakashandiswa. Kana mutengi akaenzana zvakajeka mutengo nemutengo wagamuchirwa, saka zvese zvakanaka kune wese munhu. Hapana munhu anokanganiswa. Wedzera kune izvi izvo zvinowanzo gadzira nzira ine hukama nehukama hwekudyidzana, nekuti mapato ese ari maviri anofara.
Pangu, ini ndinosarudza nekure kure kutaura kuti Hongu kune mutengi pane kuti Kwete…
Gumiguru 19, 2011 na12: 56 PM
Zano rakasimba, Jacques!
Gumiguru 24, 2011 na5: 23 PM
Saka ichokwadi - ako mapoinzi akanyatsoenderana neni apo ini ndiri kudzidza izvo zvakafanana zvidzidzo zvawakaita, uye nenzira imwecheteyo. Kwete chinhu chakashata kana kutevera tsoka dzako kuchindiisa padanho rakafanana newe makore mashoma mumugwagwa! Ndatenda nechinyorwa chinonzwisisika.